» बिराटनगरमा, प्रचण्ड माथि जुत्ता हानेको भन्दै भाइरल भएको तस्वीरको,वास्तविकता यस्तो रहेछ ! हेर्नुहोस । बिराटनगरमा, प्रचण्ड माथि जुत्ता हानेको भन्दै भाइरल भएको तस्वीरको,वास्तविकता यस्तो रहेछ ! हेर्नुहोस । – हाम्रो खबर
यो पनि हेर्नुहोस…हास्यकलाकार केदार,घिमिरे( माग्नेबुढा) को बुवाआमा भेटिए यस्तो, अबस्थामा, हसाएर झन्डै मारे (भिडियोसहित)
यो पनि हेर्नुस.. शाकाहारी भोजन उत्तम (१५ फाइदा)
३. शाकाहारी भोजनले शरीरमा स्फुर्ति पनि बढाउँछ ।
४. शाकाहारी भोजन गर्ने मानिसमा मानसिक रोगको सम्भावना कम रहन्छ ।